Dani Alves oo ugu baaqay Barcelona inay dib ula soo saxiixato Lionel Messi – Gool FM
(Barcelona) 20 Jan 2022. Difaaca naadiga Barcelona ee Dani Alves ayaa kooxdiisa ka dalbaday inay dib ula soo saxiixato kabtankeedii hore ee Lionel Messi kaasoo haatan ka tirsan naadiga Paris Saint-Germain.
34-sano jirka reer Argentina ayaa xagaagii lasoo dhaafay si la yaab leh kaga tagay Barca kaddib markii ay awoodi weysey inay qandaraaska u kordhiso, waxaana uu sidaas darteed qaab bilaash ah ugu biiray naadiga PSG isagoo la galay qandaraas labo sano ah oo haddii la isku fahmo lagu dari karo sanad kale.
“Messi waa ciyaaryahanka ugu wanaagsan taariikhda kubadda cagta, waa la yaab inaan inta joogo oo aan isaga ku arkin kooxda safkeeda” ayuu yiri Alves isagoo la hadlayay Idaacadda Catalunya ee magaalada Barcelona.
“Waxyaabaha qaar uma dhacaan sidaan ugu riyooneyno, hore ayaan ugu sheegay isaga inuusan tageyn halkan meel ka wanaagsan, waana sida uu isaga igu yiri markii aan ka tagay halkaan, aad ayay u fiicnaan lahayd haddii uu Messi halkaan kusoo af-meero xirfaddiisa, inuu halkan ku dhammeysto hadiyad weyn bey u ahaan lahayd isaga, taasna waa inay kooxda fiiro gaar ah u yeelataa” ayuu 38-sano jirka reer Brazil hadalkiisa kusii daray.
Si kastaba ha ahaatee, la qabsiga nolosha Paris ayaa lasoo warinayaa inay ku adkaatay qoyska La Pulga kuwaasoo ka fikiraya inay Barcelona kusoo laabtaan, waxaana Alves uu Barca ugu baaqay inay arrintaas dareen u yeelato oo ay ka fikirto.
Horudhac: Arsenal vs Liverpool... (Kooxdee u gudbi karta fiinaalka tartanka Carabao Cup?)